Madaafiic iyo Rasaas laga maqlayo Jiidaha Dagaalka G Sool iyo Warar cusub – Puntlandtimes
Madaafiic iyo Rasaas laga maqlayo Jiidaha Dagaalka G Sool iyo Warar cusub
TUKARAQ(P-TIMES) – Wararka naga soo gaaraya Jiidaha dagaalka ee gobalka Sool ayaa sheegaya in hubka culus laga maqlayo qaar kamid ah deegaanada ay isku horfadhiyaan ciiamada labada dhinac ee Puntland iyo Somaliland, waxaana wararku sheegayaan in rasaas goos-goos ah lamaqlayo xiliyada qaarkood.
Majirto goobjoogayaal madax banaan oo kusugan aagagan, balse wararku waxay cadeynayaan in hubkan uu yahay mid culus, waxaana la xaqiijiyey in aan ilaa hadda la ogeyn khasaare kadhashay.
Saraakiisha dhinacyada ayaa ja gaabsadey, balse.warsidaha Puntlandtimes.com wuxuu ogaaday in shalay galab madaafiic dhacday ay sababeen dhaawaca 7 Askari oo ay kujiraan saraakiil katirsan Somaliland.
Xiisadda dagaal ee u dhaxeysa Puntland iyo Somaliland ayaa sii kordhaysa waxaana cabsi laga qabaa dagaal culus oo labada kadhex qarxa waxayna horey ugu dagaalameen deegaankan 15kii iyo 24kii bishii lasoo dhaafay, kaas oo ay kudhinteen in ka badan 120 askari oo ah dhinacyada dagaalamaya.
Ilaa hadda dadaal ay garwadeen ka yihiin wadamada jaarka la ah Soomaaliya ayaa socda mana jirro horukac ama horumar ay dhinacyadu kuheshiiyeen oo la sameeyey, inkastoo ay Somaliland ay doonayso in ay dib ugu laabato deegaanka Gambara oo ay horey uga soo ruqqansadeen, haddana Puntland ayaa u aragta arrintaas mid aan sax aheyn Maamulka Muuse Biixina looga baahan yahay in ay tagaan deegaanka OOG.